24 ora miaraka amin'ny beta fahatelo an'ny macOS Sierra 10.12 ary tsy hitako ny fiovana | Avy amin'ny mac aho
24 ora miaraka amin'ny beta fahatelo an'ny macOS Sierra 10.12 ary tsy hitako ny fiovana
Ny tena izy dia kinova beta ary toy izany ny fanatsarana dia miompana mivantana amin'ny fiasan'ny rafitra ankapobeny sy ny vahaolana amin'ny lesoka tamin'ny kinova teo aloha, amin'ity tranga ity beta 2. Fa efa naneho hevitra aho tamin'ny kinova beta voalohany izay natombok'izy ireo avy amin'ny macOS Sierra 10.12 ho an'ny mpamorona fa ny fiasan'ny Mac App Store dia tsy marina tanteraka (farafaharatsiny mba ho ahy) ary amin'izao fotoana izao taorian'ny nanandramany imbetsaka ny fisintomana ny rindranasa mieritreritra ela loatra hanantonana tanteraka ny fanerena "Force quit the application" dia mitranga amiko foana.
Azoko tsara fa mety ho zavatra manokana kokoa izany satria efa namaky kely na tsy misy momba ilay tranga tao anaty tambajotra na haino aman-jery manampahaizana manokana aho ary na dia marina aza fa efa nikasa ny hanao izany tamin'ny beta faharoa aho, ny fametrahana indray ity beta ity amin'ny kapila ivelany dia toa manakaiky amiko. Etsy ankilany, mila milaza aho fa mandeha tsara ny zava-drehetra, manomboka amin'ny Bluetooth ka hatrany amin'ny Wi-Fi, izay iray amin'ireo zavatra tsy dia mahomby matetika, mandeha tsara amin'ity beta 3 ity izy ireo.
Ankehitriny dia ho avy izao ny fotoana hanohizana miady amin'ny beta vao natomboka ary miandry ny hijerena ireo bibikely na lesoka handefasana ny "tatitra" any amin'i Apple toy ny nataoko tamin'ny magazay fangatahana, fa efa nolazaiko ihany fa toa manondro ny zava-drehetra fa olana izay azo ahitsy amin'ny fametrahana indray. Tsarovy fa ireo kinova ireo izay mety hiteraka tsy fahombiazan'ny mifanentana amin'ireo rindranasa ampiasaintsika isan'andro, ka tsara indrindra amin'ny tranga rehetra ny mampiasa fizarazaran-kapila ho an'ny fametrahana na hanao azy mivantana amin'ny kapila ivelany na fahatsiarovana USB. Ny kinova vaovao dia misy ao amin'ny kiheba fanavaozana ny Mac App Store raha toa ka avy amina kinova beta teo aloha ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » 24 ora miaraka amin'ny beta fahatelo an'ny macOS Sierra 10.12 ary tsy hitako ny fiovana
Alex Rodriguez dia hoy izy:
Kamo aho ary miandry fanovana lehibe, heveriko fa zavatra mitovy amin'izany no hitranga amin'ny maro, hoy i Apple fa miova ao anatiny fa tokony hanome antsika zavatra vaovao hamaranana ny mpampiasa.
Valiny tamin'i Alex Rodriguez
Eny, amin'ireto bug beta ireto dia ahitsiny ary voavaha ny bug fa tsy manampy endri-javatra vaovao, saingy izaho manokana dia tsy nahatsikaritra zavatra tsara ho amin'izany.
Miarahaba anao Alex!
Ny zavatra niainako tamin'ny Pokemon Go, mendrika ve izany?